Global Voices teny Malagasy » Folo Taonan’ny Finamànana Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2017 6:39 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, fandikàna-voalohany, Fankalazana, firavoravoana
Nanao fitsidihana iray tao Cebu, Filipina ny mpanoratra, nandritra ny fihaonamben'ny Global voices tamin'ny taona 2015. Sary nampiasaina nahazoana alàlana.
Mety tsaroan'izao tontolo izao angamba ny tamin'ny 10 novambra 2007 izay nanambaràn'ny mpanjaka tamin'ny filoha tamin'izany fotoana izany ny fitenenana hoe “Nahoana ianao no tsy mikombom-bava? “
Fa manana dikany miavaka ho ahy io daty io. Io no andro nanjohiako ny Global Voices.
Fotoanan'ny fisalasalana teo amin'ny sehatry ny asa io ho ahy. Mpisolovavao aho tamin'izany, ary mbola toy izay hatrany, mpisolovava amperinasa izay, tamin'ny fotoanandro, no nanomboka nanontany tena ny amin'izay zavatra hafa mbola tokony ho azoko atao. Tiako no asa maha-mpisolovava, saingy nandritra ireo taona maro nanaovana fampiharana ny lalàna, nanana hetaheta hanandrana zavatra vaovao aho.
Tamin'io sabotsy io, to am-pamakiana gazety, nahatsikaritra fanamarihana iray mikasika ny tetikasa Lingua ny reniko. Liana teo ampamakiana ireo fahafahamanao nentiny aho. Ny andalana farany nivaky hoe “Raha toa ianao liana ny handray anjara maimaimpoana mikasika ny fandikàna teny, aza misalasala misoratra anarana”.
Araka izany, nisoratra aho. Fotoana fohy tamin'io andro io ihany, naharay valiny avy amin'i Juan Arellano aho, mpamoaka lahatsoratra tamin'izany fotoana izany tao amin'ny Lingua Espaniola, izay nanontany ahy raha toa manana fotoana malalaka hanaovana asa an-tsitrapo aho, raha toa aho manana fidirana tsy tapaka amin'ny aterineto ary raha toa aho manana hevitra mikasika ireo blaogy. Ny valin'ireo fanontaniana roa voalohany dia eny, mikasika izay ho valin'ny fahatelo, maika be aho ny hianatra. Araka izany, nekeny ny hanome ahy ny lahatsoratra voalohany ho adikako, izay naveriko taminy ny ampitso. Ary teo noho eo ihany dia navoakany .
Ny mpanoratra fony izy tao Great Rift Valley, Kenya, nandritra ny fihaonamben'ny Global Voices tamin'ny taona 2012 tany Nairobi. Sary nampiasaina nahazoana alàlana.
Roa taona taty aoriana, nanasa ahy hanoratra ho toy ny mpanoratra ho an'ny Global Voices, ny toniandahatsotra any amin'ny faritra, Eddie Avila. Tonga dia nanaiky aho, niaraka tamin'ireo fisalasalana ihany anefa, ary dia izay no lohatsoratro voalohany amin'ny maha-mpamoaka lahatsoratra ahy .
Betsaka ireo “tamin'izany fotoana izany” ato amin'ity lahatsoratra ity no fampahatsiahivana fotsiny ny taloha…
Eto amin'ny Global Voices, mpandikateny an-tsitrapo aho, mpanoratra an-tsitrapo ary mbola tazoniko ireo andraikitro roa ireo. Ankehitriny, mpamoaka lahatsoratra amin'ny Lingua espaniola aho. Ankoatra ireo, tonian-dahatsoratra ao amin'ny faritra aho nandritra ny volana maromaro tamin'ny taona 2014 sady nanampy ihany koa ny tetikasa Amazonia ho an'ny Rising Voices , izay nanome tombony ho ahy koa mba hiasa miaraka amin'i Eddie Avila indray.
Ho ahy, tsy fianakaviambe fotsiny ny Global Voices. Manana ny heviny lalina be izy io. Fony mbola zazavavy kely aho, nanana fahazarana niaraka nipetraka tamin'ny anadahiko, izay nandrafitra ireo lisitra lavabe tsy nanam-piafarana mikasika ireo firenena rehetra, niaraka tamin'ireo renivohiny sy ireo zava-dehibe tao aminy. Ireny anarana ireny, izay ampahany kely fotsiny tamin'ireo lisitra, no nanjary tena izy raha vao niaraka tamin'ny Global Voices aho. Noho izany, amiko, tena tsy mampino ny mihaona amin'ireo olona avy amin'ireo firenena ireo, izay nananako fahazarana ny namaky azy fony mbola tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany aho. Fanomezam-boninahitra an'ireo fampianarana nomen'ilay zokiko lahy efa nodimandry koa izany. Ho gaga amin'izany izy, azoko antoka tsara.
Nanome tombony ho ahy tamin'ireo dia marobe tany amin'ireo toerana tsy azo novinaniana ihany koa ny Global Voices, toa an'i Nairobi, Cebu ary Colombo amin'izao fotoana izao.
Ary folo taona katroka aty aoriana, inona indray no mbola ho angatahako?
Izay ilay izy, izany tokoa, folo taonan'ny finamànana mahafinaritra…. ary voakajy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/10/111125/
 Nahoana ianao no tsy mikombom-bava?: https://en.wikipedia.org/wiki/%C2%BFPor_qu%C3%A9_no_te_callas%3F
 dia navoakany: https://es.globalvoices.org/2007/11/12/japon-%c2%bfsoy-un-blogger/
 lohatsoratro voalohany amin'ny maha-mpamoaka lahatsoratra ahy: https://globalvoicesonline.org/2009/11/15/peru-blind-lawyer-strives-to-be-judge/